नेकपाले प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षको टुङ्गो लगायो, कुन प्रदेशमा को ? (नामसहित)::Pathivara News
नेकपाले प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षको टुङ्गो लगायो, कुन प्रदेशमा को ? (नामसहित)
काठमाडौ , ५ असोज स् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी९नेकपा०ले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश संगठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश नं २ को इन्चार्जमा सत्यनारायण मण्डल र सहइन्चार्जमा विश्वनाथ साह तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा प्रभु साह र सचिवमा सुमनराज प्याकुरेल चयन भए । प्रदेश नं ३ को इन्चार्जको जिम्मा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सहइन्चार्जको नारायण दाहालले पाएका छन् भने प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा हितमान शाक्य र सचिवमा आनन्दप्रसाद पोखरेल चयन भएका छन् ।
गत जेठ ३ गते साविकको नेकपा९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० एकतापछिको यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा हेरिएको छ । देशका ७७ जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको एकतासम्बन्धी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ ।